बैगुन को पुर्खाहरूको मध्य पूर्व र तिनीहरूले जंगली बढ्न जहाँ भारत, आज पाउन सकिन्छ। बैगुन बढ्न र 1,600 भन्दा बढी वर्ष पहिले वापस माग्नु गर्न थाले। यो अरब को यूरोप कसरी, बैगुन रोपेर गर्न बढ्न र तिनीहरूलाई हेरचाह सिकेका (को 19 औं शताब्दीमा) अफ्रीका गर्न जामुन ल्याए, र त्यसपछि।
यो परिवार Solanaceae (Solánum) पर्छ किनभने भनिन्छ बेरी बैगुन, अर्थ herbaceous Perennials। यो पोटासियम लवण धेरै समावेश गर्छ, त्यसैले तिनले पूर्व मा एक प्रतिष्ठा छ "तरकारी दीर्घायु।" तपाईं खाना नियमित तवरमा यसको प्रयोग भने, यो हृदय सकारात्मक प्रभाव छ, राम्रो विश्रामहरू संतृप्त बोसो, सही एसिड-आधार र इलेक्ट्रोलाइट सन्तुलन कायम। बैगुन मद्दत गाउट, मृगौला रोग, को जठरांत्रिय पर्चा मा disturbances।
बैगुन कसरी रोपेर गर्न?
पहिलो, हामी तिनीहरूलाई बिरुवा मा राखे। आज, बीउ अक्सर पहिले नै बेचिएको etched, तर तपाईं वा बीउ रुचि छैन यदि, पोटासियम Permanganate एक कमजोर समाधान सुकाउने पछि तिनीहरूलाई नक्काशी आफ्नै तिनीहरूले फसल। घ्यु रस को एक समाधान मा भिगो गर्न सकिन्छ, यो बीउ अंकुरण वृद्धि हुनेछ। पानी 1: घ्यु बोट को पात को एक जोडी बन्द त तपाईं रस squeeze र 1 को एक अनुपात मा पतला गर्नुपर्छ, फ्रिज मा पकड देखि दिन काटे। यो मिश्रण मा, दुई दिन moisten, 24 घण्टा को लागि बीउ भिजेको र त्यसपछि एक कपडा संग पकवान मा राखे। तिनीहरूले प्वाल र राम्रो फल उत्पादन।
डल्लो भन्टा लामो पर्याप्त मा बढ्दै मौसम, तपाईं को आवश्यकता माथि 120 दिन, त्यसैले एक बाली प्राप्त गर्न eggplants रोपेर कहिले थाहा। तिनीहरूले अग्रिम लगाए गर्नुपर्छ, वा गर्मी को अन्त्यमा, तपाईं फल लागि प्रतीक्षा गर्न सक्दैन। प्याकेज को भूमि तिनीहरूलाई फिट भण्डारण, र तपाईं रोपेको लागि माटो फसल भने, त्यसपछि सजिलो, काठ खरानी र superphosphate (एक चमचा) को साथै संग हुनुपर्छ। माटो टीन जब टाढा धोए छैन भनेर बक्से माथिल्लो किनारा गर्न, ठाउँ खाली को सेन्टिमिटरले छोड्नुहोस्। राम्रो, आवश्यक भएमा, शीर्ष अप देशमा।
तपाईं माटो र गति बर्तन (पीट) संग बक्स छैन भने कसरी eggplants रोपेर गर्न? यस मामला मा माटो आवश्यक रकम सिधै फसल छ, र त्यसपछि दुई वा तीन बीउ राख्दै, एक पट मा अनप्याक। त्यसपछि यो अनावश्यक मार हटाउन, वा गोता तिनीहरूलाई प्रत्यारोपण गर्न सम्भव हुनेछ। दुई पात को उपस्थिति राम्रो तैनाथ छन् बनाउन रुचि। पहिलो बीजपत्र गर्न विरोध रूपमा तिनीहरूले वास्तविक भनिन्छ। तिनीहरूलाई transplanting अघि, transplantation पछि राम्रो फेंक र प्रशस्त मात्रामा खन्याउन, र त्यसपछि मात्र पाँचौ दिन पछि हरेक पाँच छ दिन टीन नविकरण भूल छैन। संयंत्र transplanting पहिलो दुई (बीजपत्र) पात गर्न जोडतोडले गर्नुपर्छ जब माटो मा।
बिरुवा एक घाम स्थान हुनुपर्छ, र हामी उनको विन्डो चिसो थिएन भनेर पक्का गर्न आवश्यक छ। बादल दिन तिनीहरूलाई प्रकाश थप्न, साथै लम्ब्याउनु को डेलाईट घण्टा घण्टा 10। बैगुन टीन मात्र न्यानो पानी, बिरुवा को खेती जस्तै साथै आफ्नो विकास को समयमा आवश्यक छ। बैगुन बिरुवा कसरी रोपेर सिक्न, तपाईं ठीक बढ्न कसरी सम्झना गर्न आवश्यक छ।
रंग र बोट वृद्धि लागि बाहिर हेर्नुहोस्। वृद्धि धीमा छ भने, र पात फिक्का हरियो बन, यो तिनीहरूले पोषण स्रोतहरू कमी भन्ने हो। mullein प्रयोग गर्न सकिन्छ खुवाउन। पानी को5लिटर मा यूरिया र polstakana mullein को आधा चम्मच लिन। वा प्रयोग किनमेल मल, अनुप्रयोगको विस्तृत विवरण संग निर्देशनहरू प्याकेजिङ्ग मा अवस्थित छ। यदि सम्भव छ भने, podsypaniya माटो काठ खरानी लागि प्रयोग गर्नुहोस्।
न्यानो मौसम, को बिरुवा जमीन मा लगाए सकिन्छ जब, पन्नी बिरुवाहरु (एक चाप मा) ढाकिएको यसलाई बढन सबै समय मा रहन्छ हुनत। फिल्म गर्मी मा उचाल्न सक्छ। अब तपाईं eggplants कसरी रोपेर र तिनीहरूको हेरविचार थाहा छ, तपाईं सुरक्षित गर्मी को अन्त गरेर एउटा राम्रो फसल प्राप्त गर्न कि बिन्दु गर्न अगाडि बढ्न सक्छ।
स्याउको रूख फुली: विवरण, फोटो, रूख समीक्षा
कहिले र कसरी बगैचा बाट प्याज हटाउन
चितुवा पोशाक - मौसम को नयाँ प्रवृत्ति
Vygotskiy लेव Semenovich - प्रसिद्ध सोभियत मनोवैज्ञानिक
"Isoroc" (खनिज ऊन को इन्सुलेशन): विनिर्देशों र समीक्षा
सपना - उपन्यास "Oblomov" को प्रसङ्ग। सारांश
कसरी चरणमा एक रूख गिरावट आकर्षित गर्न
दोस्रो मासु पकवान। मासु प्रशोधन दुई प्रकार र कारण यो तपाईं तयार गर्न सक्नुहुन्छ
अन्ना Akhmatova प्रकाश कविता। कविता Anny Ahmatovoy जान्न सजिलो हो जो